‘द ब्रेकअप’मा उदाउँदै रुपक – जागरण अनलाइन
‘द ब्रेकअप’मा उदाउँदै रुपक
January 26, 2019 २०७५ माघ १२, शनिबार १८:१४ by जागरण मिडिया
राप्ती क्षेत्रमा सफल व्यवसायीको रुपमा कहलिएका रुपक थापाले पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा पनि इन्ट्री गरेका छन्, चलचित्र द बे्रकअप मार्फत ।
व्यवसायमा जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा पनि उनको इन्ट्री धमाकेदार रहेको छ । उनले निर्माण गरेको बिग बजेटको चलचित्र द बे्रकअप यस वर्षको सर्वाधिक प्रतिक्षित चलचित्र हो । पछिल्लो पुस्ताका अत्यन्त सफल निर्देशक हेमराज विसी निर्देशित द ब्रेकअप को ६० प्रतिशत दृश्य अष्ट्र्ेलियामा खिचिएको हो । हालै रिलिज गरिएको यस चलचित्रको ट्रेलर निकै रुचाइएको छ । ह्याप्पी प्लानेट फिल्मस्को ब्यानरमा रुपक सहित रेणु राणा, दिपक खतिवडार निर्देशक हेमराज विसीले निर्माण गरेको द ब्रेकअप फागुन १७ गते रिलिज हुँदैछ । चलचित्रमा आयुषमान देशराज, शिल्पा मास्के, रेमनदास श्रेष्ठ र इच्छा कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको छ । द ब्रेकअपको रिमिक्स गीत ‘आज हाम्रो भेट भा’को दिन’ निकै चर्चित छ ।
चलचित्र द ब्रेकअपबाट रुपक निकै आशावादी र उत्साहित छन् । भन्छन्, ‘चलचित्र स्तरीय बनेको छ । चलचित्रमा पोखरा, काठमाडौंका मनमोहक दृश्यहरु छन् । कथावस्तु र गीतसंगीत निकै अब्बल छ । समय, सीप, श्रम र लगानी पनि धेरै भएको छ । युवा दर्शकहरुको रुची र मागलाई ध्यान दिएर चलचित्र बनाएका छौं । द ब्रेकअप राम्रो चल्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
बुवा बलबहादुर थापा र आमा उर्मिला थापाको कोखबाट वि.सं. २०३७ साल जेष्ठ १२ गते रुकुमको रुकुमकोटमा जन्मिएका रुपकको कुनैबेला ब्रिटिश आर्मी बन्ने ठूलो सपना थियो । त्यो बेला उनको गाउँघरति ब्रिटिश लाहुरे बन्ने खुब लहर थियो । ब्रिटिश लाहुरे बन्ने सपनाका लागि रुपकले निकै पसिना बगाए । गाउँमा हुने गल्ला, दाङको भालुबाङमा हुने एरो सेलेक्सन हुँदै उनी तीनपटकसम्म पोखरामा हुने फाइनलसम्म पुगे । तर फाइनलमा उनी छनौट हुन सकेनन् । २०५२÷०५३ देखि शुरु भएको यो क्रम २०५६ सालसम्म जारी रह्यो । बीच उनले बुवाको इच्छा अनुसार नेपालगंजमा अहेबको पढाइ शुरु गरे र सकाए पनि ।
ब्रिटिश लाहुरे बन्ने सपना तुहिएपछि रुपक आठ लाख रुपैया लिएर अमेरिका जाने उद्देश्यले काठमाडौं गए । खासमा बुवाको इच्छा अनुसार उनी अमेरिका जाँदै थिए । उनको मनमा भने देशमै बसेर केही गर्ने भावना सलबलाइरहेको थियो । काठमाडौं उड्ने तीनदिन बाँकी थियो । तर रुपकमा अमेरिका मोह पटक्कै भएन । अन्ततः उनी आफ्नै देशमा पौरख गर्ने भावना र संकल्पसहित दाङ फकिए । ‘मलाई आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने लाग्यो । दाङमा व्यापार गर्ने योजना बनाएर म फर्किएँ ।’ रुपकले विगत संझिए ।
वि.सं. २०५७ सालमा उनी दाङको लमहीमा पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने आफ्ना भिनाजु मुक्तिनाथ न्यौपानेसंग मिलेर व्यवसाय गर्न थाले । उनी यसमा निकै उत्साहित र सन्तुष्ट थिए । २०५८ मा उनका भिनाजु मुक्तिनाथको निधन भएपछि दिदी, भाञ्जाभाञ्जीको लालनपालन र संरक्षणको साथै व्यापारको सबै जिम्मा उनको काँधमा आयो । तर उनी विचलित भएनन् । उच्च साहस र दृढ संकल्पका साथ उनी व्यवसायमा अहोरात्र जोतिइरहे । परिणामतः आज व्यवसायमा उनले लोभलाग्दो सफलता र प्रतिष्ठा कमाएका छन् । अहिले उनी किसान फ्रेस हाउस, किसान फिड इण्ड्रस्ट्रिज, होटल थ्री स्टारका मालिक हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले उनले गुरुकुल एकेडमीमा पनि लगानी गरेका छन् । करिब दुई दर्जन बढीलाई उनले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । पछिल्लो समय उनले १० जना व्यवसायीसंग मिलेर घोराही १० अम्राइमा करिब १८ करोड लागानीमा फन पार्क निर्माणमा जुटेका छन् । छ बिगाह क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको फन पार्कमा तीनवटा स्वीमिङ पुल, चिल्ड्रेन पार्क, पिकनिक स्पट, इनडोर÷आउटडोर गेमजोन, गेष्ट हाउस, पार्टी प्यालेस र रेष्टुरेण्ट रहनेछन् ।
वि.सं. २०६० सालमा दाङकी सुनिता थापा मगरसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि रुपकको स्थायी कर्मथलो दाङ बन्यो । व्यवसायमा सफलता मिल्दै गएपछि २०६८ मा उनी दाङको घोराहीमा संचालित झरना एफ.एम.को अध्यक्ष बने । यही बेला उनले घोराहीमा राष्ट्रियस्तरका कलाकारहरु लिएर शान्ति र संविधानका लागि सांगीतिक अभियानको आयोजना गरे । यो कार्यक्रमसँगै उनी कला र मनोरञ्जन क्षेत्रतिर आकर्षित हुन थाले । कला र मनोरञ्जन क्षेत्रमा केही नवीनतम कार्य गर्ने सोच बनाएर उनले दाङका युवाहरु राज राना, नरेश बिक र थम्मन भण्डारीसंग मिलेर २०६८ पेज थ्री इन्टरटेनमेन्ट स्थापना गरे । यही ब्यानरमा उनले दाङमा मिस दाङ, लिटिल मिस एण्ड मिस्टर दाङ, फेशन वाक, डिजे नाइट कार्यक्रमको प्रारम्भ गरे । इण्डियन आइडल प्रशान्त तामाङलाई दाङ ल्याएर उनले ‘प्रशान्त तामाङ लाइभ इन दाङ’ कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । जो निकै भव्य र ऐतिहासिक थियो । पेज थ्रीको ब्यानरबाट उनले दाङ लगायत नारायणघाट, धादिङ र काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरका साँगीतिक कार्यक्रमहरु संचालन गरे ।
व्यापारिक सफलतामा रमाइरहेका रुपक २०७० मा निर्देशक हेमराज विसीसंग मित्रता भएपछि चलचित्र क्षेत्रमा आकर्षित भए । उनले आफू सहित दीपक खतिवडा, रेणु राणासंग मिलेर ह्याप्पी प्लानेट फिल्मस् नामको ब्यानर निर्माण गरेका छन् । अब भने उनी व्यवसायिकरुपमा चलचित्र क्षेत्रमा लाग्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘अब म चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गर्छु । नेपाली चलचित्र उद्योगको प्रवद्र्धनमा सक्दो योगदान दिन्छु ।
संसारका सबै मानिसहरुको ‘सपनाको देश’ अमेरिका नगई दाङ फर्केर व्यवसायमा लाग्दा शुरुका दिनहरुमा रुपकका बुवा केही असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । तर अचेल उहाँ जति गदगद कोही छैन । रुपक भन्छन् ‘बुवा एकदम खुशी हुुनुहुन्छ । सायद सबैभन्दा धेरै खुशी र सन्तुष्ट बुवा नै हुनुहुन्छ होला ।
द ब्रेकअपको प्रचार प्रसारमा जुटेका रुपक आगामी बैशाखदेखि प्रदीप खड्का र सामाग्री राणालाई लिएर नयाँ फिल्म शुरु गर्दैछन् । आफ्नो उर्जा, सीप, श्रम र पूँजीले नेपाली अर्थतन्त्र, कला, संस्कृति, पर्यटन, चलचित्र र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा गहकिलो योगदान दिएका रुपक साँच्चिकै युवाहरुका एक आदर्श आइडल हुन् ।
Categories फोटोफिचर Post navigation
घाेराहीमा स्काेप म्यूजिक ईन्टिच्यूट सुरू
महायज्ञ आयोजक समितिद्वारा धन्यवाद ज्ञापन